निर्जला कक्षपति - | Nagarik News - Nepal Republic Media
निर्जला कक्षपतिका लेखहरु :
स्कुल बसमा बच्चाहरूको बेहाल
दिउँसोको ४ बज्दै थियो । अफिसबाट फर्केर हस्याङफस्याङ गर्दै छोरीलाई लिन जाँदै थिएँ । घर नजिकैको मोडमा एउटा माइक्रो बस अनियन्त्रित तवरले आएर रोकियो । र, बसबाट बच्चाहरूलाई थुत्दै निकालेर भुइँमा फ्यात्त फालिदियो । बाटो निकै साँघुरो थियो । मोटरसाइकल पनि हर्न बजाउँदै त्यहीँ अडिएको थियो । बच्चालाई त्यसरी बसबाट थुतेर बाटोमा फयाँकेको देखेर मैले भनँे, ‘ओ भाइ ! बच्चालाई कसरी झारेको ? मोटरसाइकल आइरहेका छन्, किच्चिए भने ? यसरी जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ झार्ने हो बच्चालाई ?’
निर्जला कक्षपति १९ भाद्र २०७४ सोमबार ९ मिनेट पाठ
गृहकार्यले थिचिएका नानी
विद्यार्थीलाई क्षमतावान् बनाउने नाममा विद्यालयले दिनहुँ दिने गरेको गृहकार्यका कारण विद्यार्थीहरू सकसमा पर्ने गरेका छन्। विद्यालयबाट फर्केपछि न उनीहरूसँग खेल्ने समय छ, न विद्यालयमा भए गरेका गतिविधिबारे आफ्ना अभिभावकसँग अनुभव साटासाट गर्ने समय नै।
निर्जला कक्षपति १२ श्रावण २०७४ बिहीबार ९ मिनेट पाठ
‘भन्दिन म यो तीजमा सुनको बाला चाहिन्छ, आफूले त यो तीजमा दर खाँदा नि रक्सी खाइन्छ । न त दही दूध चाहिन्छ न त फलफूल चाहिन्छ, आफूले त यो तीजमा दर खाँदा नि ह्विस्की खाइन्छ’– एक दिन कार्टुन खोज्ने क्रममा मेरी छोरीले युट्युबमा यो बोलको गीत फेला पारिछन्।
निर्जला कक्षपति १५ भाद्र २०७३ बुधबार १० मिनेट पाठ
नयाँशक्ति नेपाल नामक पार्टीको गठनसँगै यस्को चर्चा व्यापक छ। राजनीतिक दल र ती दलका नेतामा यसको झस्को परिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त यो पार्टीको घोषणा समारोहमा नै एमालेबाहेक सबै पार्टीलाई धक्का दिन सक्छ भनेपछि समाजमा झनै तरंग उब्जिएको छ।
निर्जला कक्षपति २६ असार २०७३ आइतबार १४ मिनेट पाठ
निर्जला कक्षपतिका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्